Maraykanka oo ka hadlay Wadashaqaynta Dowlada dhexe Somaaliya iyo Dowladaha xubnaha ka ah. – Geelle Magazine
Maraykanka oo ka hadlay Wadashaqaynta Dowlada dhexe Somaaliya iyo Dowladaha xubnaha ka ah.
ahmedzaki Posted On September 26, 2020
War qoraal ah oo kasoo baxey wasaarada arimaha dibada ee maraykan ayaa lagu sheegay in ay dowlada maraykanka soodhawaynayso sida wadajirka ah ee ay uwada shaqaynayaan dowlada dhexe ee somaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Dowladda dhexe, dawladaha xubnaha ka ah dowlada dhexe iyo gobolka banaadir ayaa heshiis rasmi ah ka gaarey hanaanka doorashada dalka ee 2020/2021 kaas oo ay manta cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen laba aqal barlamaanada somaaliya.
Dowladda somaaliya oo sheegtey in ay Caruur kasoo furatay Al-shabaab.